ကနဒေါနိုငျငံမှ ပညာရှငျမြားက SMEs လုပျငနျးရှငျမြားကို နညျးပညာဆိုငျရာအကွံဉာဏျမြား ပံ့ပိုးပေးမညျ - Industry Directory
ပွညျတှငျးရှိ အငယျစား၊ အသေးစားနှငျ့ အလတျစား (SMEs) လုပျငနျးရှငျမြားကို ကနဒေါနိုငျငံ CESO Organization မှ ပညာရှငျမြားက Branding, Marketing and Packaging ဆိုငျရာလိုအပျခကျြနှငျ့ ပကျသကျပွီး နညျးပညာဆိုငျရာအကွံဉာဏျမြား ပံ့ပိုးပေးမှာဖွဈကွောငျး စကျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ စဈဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယျ။
ကနဒေါနိုငျငံ CESO Organization မှ ပညာရှငျ Debbie Scoffield မှ Branding, Marketing and Packaging ဆိုငျရာလိုအပျခကျြမြားနှငျ့ ပကျသကျပွီး ရနျကုနျမွို့သို့ (၆.၁. ၂၀၂၀) မှ (၃၁.၁. ၂၀၂၀) ထိရောကျရှိမှာဖွဈပါတယျ။
၎င်းငျးက ရောကျရှိနစေဉျကာလအတှငျး Agribusiness နှငျ့ Food Production ဆိုငျရာ MSMEs လုပျငနျးရှငျ (၁၂) ဦးကို Branding, Marketing and Packaging ဆိုငျရာ လိုအပျခကျြမြားနှငျ့ ပကျသကျ၍ လုပျငနျးခှငျမြားသို့ သှားရောကျပွီး One on One Coaching Sessio ပွုလုပျမှာဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။
ကနဒေါပညာရှငျနှငျ့ One on One Coaching Session ကို စိတျဝငျစားသညျ့ MSMEs member ဝငျထားသူမြားအနနေဲ့ (၂.၁. ၂၀၂၀) ရကျနေ့ နောကျဆုံးထားပွီး အောကျဖျောပွပါ ဖုနျးနံပါတျသို့ ဆကျသှယျစာရငျးပေးသှငျးနိုငျပါကွောငျး စကျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ စဈဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယျ။
ဒျေါတငျအေးကွူ (ဌာနခှဲမှူး) ၀၉ ၇၈၀၀၂၆၁၇၁
ကနေဒါနိုင်ငံမှ ပညာရှင်များက SMEs လုပ်ငန်းရှင်များကို နည်းပညာဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ ပံ့ပိုးပေးမည်
ပြည်တွင်းရှိ အငယ်စား၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား (SMEs) လုပ်ငန်းရှင်များကို ကနေဒါနိုင်ငံ CESO Organization မှ ပညာရှင်များက Branding, Marketing and Packaging ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်နှင့် ပက်သက်ပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ ပံ့ပိုး​ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံ CESO Organization မှ ပညာရှင် Debbie Scoffield မှ Branding, Marketing and Packaging ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့် ပက်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့ (၆.၁. ၂၀၂၀) မှ (၃၁.၁. ၂၀၂၀) ထိ​ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ​
၎င်းက ရောက်ရှိ​နေစဉ်ကာလအတွင်း Agribusiness နှင့် Food Production ဆိုင်ရာ MSMEs လုပ်ငန်းရှင် (၁၂) ဦးကို Branding, Marketing and Packaging ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ပက်သက်၍ လုပ်ငန်းခွင်များသို့ သွား​ရောက်ပြီး One on One Coaching Sessio ပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကနေဒါပညာရှင်နှင့် One on One Coaching Session ကို စိတ်ဝင်စားသည့် MSMEs member ဝင်ထားသူများအနေနဲ့ (၂.၁. ၂၀၂၀) ရက်​နေ့​ နောက်ဆုံးထားပြီး ​အောက်​ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်စာရင်း​ပေးသွင်းနိုင်ပါ​ကြောင်း စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယ်။
ဒေါ်တင်​အေးကြူ (ဌာနခွဲမှူး) ၀၉ ၇၈၀၀၂၆၁၇၁
စကျမှုလုပျငနျးမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး စငျကာပူကုမ်ပဏီတဈခုက နညျးပညာရပျဆိုငျရာ ဆှေးနှေးပို့ခပြေးမညျ